Home > Travel Europe > Inona no Nalaza Indrindra Ary Historical Train Routes
No, Travel midika nankafy ny dia. Fonosana amin'ny vatan-kazo, ary angamba ny kompà sy ny maro tsara sarintany. Travel midika handeha ho any amin'ny toerana izay tsy misy olona nahafantatra, izay na dia ny rivotra nahatsiaro ho hafahafa sy ny taratasy an-trano ihany no mety tonga araka ny hiverina.
London ho any Venice amin'ny Orient Express – The Longest Famous and Historical Train Routes
Izany dia antoka indrindra ho toy ny avo roa heny ny daty manan-tantara! This is possibly the most Famous and Historical Train Routes and a tantaram-pitiavana fiaran-dalamby lalana eto amin'izao tontolo izao. Miainga avy any Paris amin'ny lalana ho any amin'ny tanànan'i Byzance Istanbul. Afaka Tamin'ny fitsipika tapakila avy SaveATrain handeha lalana ity, na hifidy ny amin'ny safidy glamorous kokoa sy mitsambikina amin'ny Orient Express. Ny fiokoana ity dia malaza mihaja fiaran-dalamby ara-tsindrimandry Agatha Christie. Izany andro izany fa tsy miasa intsony amin'ny teny am-boalohany ny toe-tsaina mbola velona any Belmond ny Venice-Simplon Orient Express. Misy fiarandalamby roa, raha ny tena izy, ny iray miaraka amin'ny kalesy miaraka amin'ny taona 1920 sy ny 30 taona ary ny iray manan-tantara British Pullman fiaran-dalamby.
Ny lalana vaovao rivotra ny lalana avy London ho any Venice, indraindray anisan'izany ny hafa toerana any Eoropa, ary ny indray mandeha isan-taona tany am-boalohany Istanbul Paris-dalana tamin'ny volana Aogositra.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-historical-train-routes%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#malaza #FamousTrains #HistoricTrains europetravel longtrainjourneys TrainStation fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel